Raphael Varane oo dib ugu soo laabtay Madrid si uu go’aan uga gaaro Mustaqbalkiisa Kooxda, xilli la la xiriirinayo Chelsea iyo Man United - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Raphael Varane oo dib ugu soo laabtay Madrid si uu go’aan uga gaaro Mustaqbalkiisa Kooxda, xilli la la xiriirinayo Chelsea iyo Man United
July 19, 2021 at 13:23 Raphael Varane oo dib ugu soo laabtay Madrid si uu go’aan uga gaaro Mustaqbalkiisa Kooxda, xilli la la xiriirinayo Chelsea iyo Man United2021-07-19T13:23:21+02:00 CAYAARAHA
(Madrid) 19 Luulyo 2021. Raphael Varane ayaa dib ugu soo laabtay Magaalada Madrid si uu go’aan uga gaarso mustaqbalkiisa Real Madrid, maadaama la la xiriirinayo Kooxaha Chelsea iyo Manchester United.
Tababare Carlo Ancelotti ayaa billaabi doona shaqadiisa cusub ee Kooxda Los Blancos todobaadkan, waxaana xiddigihii Real Madrid dhanka xulka qaranka uga maqnaa.
Karim Benzema, Raphael Varane, Luka Modric, Toni Kroos, David Alaba iyo Gareth Bale ayaa markii lagu soo reebay wareegga 16-ka Euro 2020 waxa ay dib ugu soo laabteen shaqadooda Real Madrid, waxaana kaddib dib uga soo biiri doona Thibaut Courtois iyo Eden Hazard.
Maalmaha soo socda ayaa qaar ka mid ah xiddigaha Kooxaha waxa ay go’aan ka gaari doonaan Mustaqbalkooda, gaar ahaan Varane.
Daafacan ayaan weli ka jawaabin dalabkii heshiis cusbooneysiinta ahaa ee ay u soo bandhigtay Real Madrid, waxaana uu haatan haystaa dalabyo uga imaanaya labada Kooxood ee ka wada dhisan dalka Ingiriiska ee Manchester United iyo Chelsea.
Man United ayaa u muuqata inay safka hore kaga jirto tartanka loogu jiro saxiixiisa, sidoo kale Los Blancos xitaa waxay u muuqataa inay aqbashay in laacibka reer France uu xagaagan baxo, waxaana hadda kaliya ay Madrid doonaysaa inay hubiso inay helaan lacagta ay laacibkan ay ku qiimaayaan laacibkan.
« Xiisadda iyo khilaafka u dhaxeeya Imaaraadka iyo Sacuudiga oo kasii dartay
Malcuunkii sameeyey Sawir gacmeedyada loogu gefay Nebiga SCW oo geeriyooday »